Cnaps: fanofanana tany Moramanga | NewsMada
Nitohy tany Moramanga ny fanofanan’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps) sy ny Foibem-pitantanan’ny sekoly katolika (Dinec) ny tompon’andraikitry ny sekoly, ny herinandro lasa teo. Nampahafantarina azy ireo ny zon’ny mpiasa sy ny adidin’ny mpampiasa. Nisolo tena ity farany ny ray aman-drenin’ny mpianatra sy ny talen’ny sekoly, miandraikitra ny fiahiana sosialy ny mpanabe. Nitarika ny fiofanana ho an’ireo mpandray anjara niisa 40 ny talen’ny fenitra sy ny fikarohana ao amin’ny Cnaps foibe, Rasoanaivo Didier. Nampahafantarina ny lalàna mifehy ny fiahiana sosialy, ny fifanarahana momba ny asa, ny tombontsoa samihafa omen’ny Cnaps ny mpiasa sy ny fianakaviany, ny loza sy aretina vokatry ny asa, ny fisotroan-dronono, sns.
Ambany ny tahan’ny fandoavana latsakemboka
Nilaza ny sekretera jeneralin’ny vaomiera episkopaly ny fanabeazana katolika, ny mompera Ranaivoson Jules, fa mandoa ny vola ho an’ny mpanabe ny ray aman-drenin’ny mpianatra ka tsara ny ahalalan’izy ireo ny lalàna. Nanamarika ny ray amin-dreny avy any ambanivohitra fa vokatra ny andoavana ny karaman’ny mpanabe ka ilaina ny fandrindrana izany amin’ny fandoavana ny latsakemboky ny mpanabe. Isan’ny fepetra ahazoana ny tombontsoa ny fandoavana ny latsakemboka sy ny filazan-karama isaky ny telo volana.
Nanamarika Rasoanaivo Didier fa ambany ny tahan’ny fandoavana latsakemboka eto Madagasikara mitaha ny any Afrika satria mbola 34% monja. Ilaina ny fiaraha-miasa toy ny ataon’ny minisiteran’ny Asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy, sy ny Cnaps, manentana ny mpampiasa hanefa ny adidiny. Efa nisy fiofanana toy izao tany Moramanga, ny taona 2015.